मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘त्यस्तो ठाउँ भेटेको छैन, जहाँ विभेद नहोस्’ - Khula Patra
मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘त्यस्तो ठाउँ भेटेको छैन, जहाँ विभेद नहोस्’
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन ०४, २०७८
प्रकाशित समय: २०:५३:२७
चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’ को दोस्रो सिजन असोज २२ देखि प्रसारणमा आउँदैछ । जात सबैको साझा मुद्दा हुनुपर्छ र जातबारे सबै जातजातिले संवाद गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यको निर्माण गर्न समता फाउन्डेशनले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमको यो सिजनमा अभिनेताद्वय राजेश हमाल र दयाहाङ राई, मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी, गायक प्रकाश सपूत र सञ्चारकर्मी निश्मा ढुंगाना चौधरी सञ्चालकका रुपमा रहनेछन् । फाउण्डेसनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चालकहरुले सुनाएको अनुभव हामी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
मोहना अन्सारी, मानव अधिकारकर्मी
मैले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनैपनि समय भेटेको छैन, जहाँ मैले विभेद नखपेको होस् । मलाई याद छैन, मैले एकदमै सोहार्द रुपमा, सम्मानपूर्ण व्यवहारको महसुस गरेको छैन, मेरो नामलाई लिएर, मेरो नामको पछाडिको थरलाई लिएर । कतिपय समयमा त मान्छेहरुले भन्छन् कि, ए तिमी पक्कै ब्राह्मणकी छोरी हौ । र तिम्रो आमा अथवा बाबा हिन्दु हुनुुहुन्छ । मान्छेहरुले यत्तिकै अनुमानहरु गर्छन् । यसरी मसँग चाँहि दुई वटा कुरा जोडिएर आउने गरेको छ, एउटा जात, अर्को धर्म ।
कहिले काँही तिमी मुस्लिम हो । बाहिर बस ! तिमीले छोएको मैले खानुहुदैन भन्ने पनि मैले भोगेँ । कहिलेकाँही तिमलाई चोख्याउनुपर्छ भनेर पनि भनियो । मेरो क्षेत्री÷बाहुन साथीहरु हुन्थे । कहिलेकाँही हामी सँगै मन्दिर जान्थ्यौँ । बागेश्वरी मन्दिर पुग्दा त्यहाँ उनीहरुले तिमी मन्दिरभित्र जानुहुदैन भन्थे । यस्ता अनेकथरी अनुभव छन् ।
कहिलेकाँही त लाग्छ, यो जातको बहसमा जोडिन नै नपरोस् । तर, अहिले फेरि हामी त्यही अभियानमा छौँ । खासमा त्यस्ता कुराहरु म सम्झिननै चाहदिनँ । म मेरो समुदायबाट यहाँसम्म पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुँ होला सायद । मैले त्यही विभेद खेपेँ । खेप्न बाध्य भएँ । अहिले पनि विभेदको महसुस हुन्छ । आफु विभेदमा परेको भन्न छोड्नुस् भनेर धेरै भन्नुहुन्छ ।
तर मैले त दोहोरो तेहोरो विभेदको शिकार हुनुप¥यो । अझै मैले पितृसत्ताको तापमा सधैँ जेलिरहनुप¥यो । मलाई लाग्छ, मानव जीवनको उत्पत्ति नै ….! खान र सुत्न त सबैले जानेका छन् । र, खाने र सुत्नेमात्रै यदि जीवन हो भने अरु केही पनि चाहिदैन होला सायद ।